Izinwele Ezinhle Kakhulu Zabesifazane 2021: 46 Imibono Yezinwele Ethandwa Kakhulu Yokuzama - Ubuhle
Izinwele ezihamba phambili zabesifazane ngo-2021
Ukusuka eHonolulu kuya eBoston, nazi izitayela ezithandwa kakhulu abesifazane abazifunayo.
Noma ngabe ukhipha izinwele zezinwele ezihamba phambili zabesifazane noma ufuna ukwazi ukuthi izinwele ezithandwa kakhulu ziyanda, ufike endaweni efanele. Manje njengoba sesinjalo ngo-2021 , asikusoli uma ufuna indlela yokugeza noma yisiphi isikhumbuzi sonyaka odlule. Ngenkathi sithanda i-lob yakudala kakhulu njengomuntu olandelayo, kwesinye isikhathi udinga ukuhluka okuncane-futhi iyiphi indlela engcono yokuthola ugqozi kunezinwele ezipholile kunazo zonke ezivela e-U.S.?
Izinkomba ezisontekile eziseDetroit, ama-bobs aqoshwe e-Austin, nama-curtain bangs eNew York City, sicele abakwa-stylists ukuthi babelane ngezitayela eziceliwe kakhulu kuma-salon abo ukuze bakulethele izinwele ezinhle kakhulu zabesifazane kuzo zonke izingxenye zezwe. Skrolela kuwo wonke ugqozi oludingayo.
Yonke imikhiqizo ifakiwe ku- Ubuhle zikhethwe ngokuzimela ngabahleli bethu. Kodwa-ke, uma uthenga okuthile ngezixhumanisi zethu zokuthengisa, singathola ikhomishini yokusebenzisana.
I-Instagram / @kimkardashian 1/46
Mude futhi uSleek
Uma ungakwazanga ukufika salon, ungesabi, njengomdwebi wezinwele wodumo U-Aviva Perea uthi izinwele ezinde ezingasile zihamba phambili kanzima ngo-2021. Sengike ngabona abantu abaningi abanezinwele ezinde kunalezo abavame ukuzigqoka, usho kanje. Ngicabanga nokuthi kuzoba kukhulu futhi kuqonde, kube mnandi futhi kucwebezele. Kunekhono elincane eliza nokusebenzisa i-curling iron, kepha abantu abaningi bayakwazi ukugoba i-flatiron phansi kwezinwele zabo.
URoy Rochlin / Getty 2/46
Isihluthulelo sokwenza ubude bubukeke busempilweni, hhayi ngokudabukisayo, ukucela isitayela sakho sokusika okuphansi okungagqamile ngezingqimba ezinde. Bese kuba nezinyathelo ezimbalwa zokuthola lokho kubukeka okuhle kakhulu ekhaya. Uqonde ngqo eshaweni, ufuna ukufaka i-serum lapho izinwele zakho zisamanzi kakhulu-ngaleyo ndlela zizokhiya emswakeni futhi zigcine izinwele zakho zibushelelezi, kusho uPerea. Ngiyayithanda i- Amandla Owengeziwe Amandla avela kuJohn Frieda . Inokukhishwa koqalo, okusiza izinwele zami ukuthi zihlale zinamanzi ngenkathi kuncishiswa ne-frizz.
Instagram / @ umabhebhana 3/46
Amagagasi anganakekeli abelokhu eyisidina samantombazane apholile, kepha ngabesifazane abaningi abalahla isitayela sokushisa, uPerea uthi ulindele ukunyuka kwamagagasi omiswe emoyeni kulo nyaka. Izinwele ezingenamsebenzi ziqala ngokusika okukhulu, futhi kubalulekile ukuthi umlobi wakho wezinwele abeke isisekelo sezinwele ezingadingi isitayela esiningi. Uma usesihlalweni, ufuna ukuqiniseka ukuthi izingqimba zilingana futhi zisinda kusukela endlebeni kuya phambili, kusho uPerea. Ufuna futhi ukucela ukuthi isitayela sakho 'sinqamule' izingqimba. Uma uthatha ukusikeka okungafani nalutho ungqimba, unikeza izinwele zakho endaweni ethile ukuthi zihlale, okuthi uma womisa umoya kuyisihluthulelo. Uma unezendlalelo ezingacacile, izinwele zakho zizoma zodwa futhi zibukeke zinkulu.
kanjani ukugibela ubuso bakhe
I-Instagram / @sbahle_mpisane 4/46
Noma ngabe unezinwele ezisontekile noma ezi-wavy, ungakufinyelela lokhu kubukeka, kepha kufanele ulungiselele izinwele zakho ngesifutho esihle kakhulu, esisebenza kahle kakhulu, kusho uPerea. Uyayithanda i- UJohn Frieda Frizz Wanciphisa Ukudla Kwansuku Zonke Ikhefu Lokungenela ukugqoka izinwele nokukhiya i-frizz. Lapho izinwele zami zimanzi, ngihlukanisa izinwele zami ukuze umkhiqizo uhlakazeke ngokulinganayo. Ngemuva kokuthi seligcwele ngokuphelele, nginika izinwele zami ama-twist amnene ukukhuthaza igagasi eliphumelelayo, elingenamsebenzi engililandelayo.
I-Instagram / @sibusisomakhathini 5/46
Uma isizini yakamuva ye Umqhele ucabanga nge-chop ephefumulelwe ngu-Diana, awuwedwa. URyan Trygstad Isazi sezinwele esidumile nomsunguli kaMark Ryan Salon waseNew York, uthi ubelokhu enikeza amaklayenti akhe ithuba lwanamuhla lokugunda izinwele zenkosazana. Lokhu kubukeka okusha kwe-2021 futhi kudlulisa ukuzethemba nesitayela sonyaka omusha, usho kanje. Ukusikwa uqobo kuyingxube yebob emfushane egqinsiwe ebheke pixie.
I-Instagram / @sbahle_mpisane 6/46
UTrygstad uthi ukulindela ukuthi amanye ama-90s akhuthaze ukusikeka okuhle kakhulu ukuthi kubuye futhi. Uma ungakakulungeli ukungena shí endaweni yama-pixie, zama i-bob ebushelelezi yobude besilevu njengalena eKaia Gerber.
I-Instagram / @cutlersalon 7/46
Ufuna ama-bangs ngaphandle komzamo? Amakhethini amakhethini acishe alondolozwe njengoba ethola. Amakhethini amakhethini ayisango lama-bangs, ngoba ahlukahluka kakhulu, kusho u-Emily Heser, isitayela I-Cutler Salon eNew York City. Zinde ngokwanele ukuthi zingakhula noma ziphinde zibuyele emuva uma ufuna, kepha futhi zingasikwa zibukeke zibe mfushane. Uma usohlangothini olungazibophezeli uma kukhulunywa ngokusikeka kwakho, cabanga ngalokhu ukufana kwakho. (Ukuthola ezinye izinhlobo zama-bangs esizithandayo, chofoza lapha).
I-Instagram / @sbahle_mpisane 8/46
Esinye sezizathu zokuthandwa ngobuhlanya kwamakhethini (ngokungathí sina, zama ukuskrola i-Insta ngaphandle kokubona i-pair) ukuthi basebenza ngazo zonke izinhlobo zokwakheka. Akunandaba ukuthi uhlobo luni lwezinwele zakho, ukhiye uthola ukuma kahle. Gcina imiphetho yinde isikhathi eside kunaphakathi nendawo neziphetho zithambile ziqala maphakathi nabafundi futhi zisebenzele umhlathi, kusho uTim Dueñas, isazi sezinwele eL. I-Nine Zero One salon .
Ngokuzithoba kuka-Alan Vuong 9/46
Awuqinisekile ukuthi wenzeni ngezinwele zakho? Faka i-bang, kusho u-Alan Vuong, umnikazi we Igumbi Elimhlophe e-Honolulu, othi ama-bangs adumile kuwo wonke amabanga we-2021, kepha ikakhulukazi uma ebhangqwe nezendlalelo ezinde. Ndawonye zigeleza ngaphandle komthungo eceleni komugqa wobuso bakho, ngama-bangs ekhipha amehlo akho, usho kanjalo. Uyaphawula ukuthi ama-bangs athambile, ama-curtain bangs, kanye ne-middle-part bangs konke kuhamba phambili, kepha uthanda kakhulu ama-bangs aphakathi nendawo abhanqwe nesendlalelo sakhe sesiginesha se-chandelier (izingqimba ezinde, ezithambile ozibona esithombeni lapha). Ukuthola ukubukeka okufanayo, uthi ucela izingqimba ezinde ngemuva futhi ezibushelelezi, izingqimba ezithweswe iziqu ukubiyela ubuso bakho.
Instagram / @ membalonla 10/46
Ukuqhuma okunzima kunqenqema izingqimba ezinde ngaphandle kokudlulela ngokweqile. Ama-Choppy bangs adonsela ukunaka ngqo emehlweni akho futhi aboleke leyo vibe yevintage, ngenkathi izingqimba ze-chandelier ezinde zengeza incazelo kepha azideli ubude. Uthola okuhamba phambili kwemihlaba yomibili.
I-Instagram / @nomfundo_mthembu 11/46
Ngenkathi iBig Chop ingeyona inkambiso, kube unyaka omkhulu ikakhulukazi wabesifazane abashintsha besuka ezinweleni zemvelo bekhululekile. Qala okusha ngokusika okunqampuliwe — noma ukusikwa kwe-buzz —ngakho ama-curls akho akhula ngayo yonke inkazimulo yawo yemvelo.
UTaylor Hill / Getty 12/46
Uma ucabanga ngesimo sezulu samanje, abesifazane abaningi benza izinwele zabo emakhaya, ngakho-ke ukubukeka okulula, okungenamandla kuzosiza, kusho UNaeemah LaFond , Umqondisi wobuciko womhlaba wonke ka-Amika. Abesifazane bangathatha ithuba lokwamukela ukuthungwa kwabo kwemvelo kunanini ngaphambili ngoba abanakho ukufinyelela okuningi kuma-salon njengangaphambili. Ukusika okufushane, okusikiwe njengoLupita Nyong'o kuyindlela enhle yokwamukela ukuthungwa kwakho.
Ngokuzithoba kukaLauren Moser 13/46
Abesifazane baseDetroit bakhuluma ngokwamukela ukuthungwa kwabo kwemvelo futhi bebelokhu besikhawini se-shag ebesidume amasizini ambalwa manje. ULauren Moser, uchwepheshe we-curl nomnikazi we Izinwele Lab Detroit, ithi okwenza i-shag ibukeke yesimanje ukusebenza nokuthungwa kwakho kwemvelo, okuyinikeza ukubukeka okupholile nokuhlala kahle. Ngenkathi amantombazane asontekile angahle esabe ukufuna ama-bangs, uMoser uthembisa ukuthi lokhu kusika kusebenza ngawo wonke amaphethini ama-curl. Isici esichazayo salokhu kunqunywa ama-bangs asindayo nezendlalelo zesikwele ezinikeza lokhu kubukeka, kusho yena. Ngama-curls we-wavy nezinhlobo eziminyene, eziqinile ze-S-curl, qiniseka ukuthi ucela izingqimba zangaphakathi — noma ze- ‘channel cut’ — ezizofakwa phakathi ngemuva kokuba umumo usikiwe ukukhuthaza ukungabi namandla nokuthungwa kuyo yonke indawo ukuze kube lula ukwenza isitayela. Ngezinwele ezi-coily ne-kinky, lesi sinyathelo asidingekile ngoba uhlobo lwakho lwe-curl aludingi usizo ngevolumu.
ikhanda elimnyama ngemuva ngeke liphume
UJohn Shearer / Getty 14/46
Imfihlo yokubethela isiga esisontekile njengoSandra Oh? Umkhiqizo, uthi U-Amber Maynard Bolt , isitayela esiphakeme e-LA's Nine Zero One salon. Thola okuthile okuzogcina izinwele zakho zithambile kepha kuvumele ukubanjwa okuncane, kusho yena. Ngiyithanda kakhulu i-combo yokusebenzisa Ku-Common Magic Myst ukuqala inqubo yomswakama. Ngemuva kwalokho ngifaka i-combo ye I-Ouidad Curl Quencher futhi I-Featherlight Styling ukhilimu . Ngokuya ngokuthi izinwele zakho zikhulu noma zingaphansi kangakanani, ungakhetha ukomisa umoya noma ukusabalalisa. Lapho izinwele sezomile, buyela emuva kwi-Magic Myst ukuze uvuselele futhi uqede noma iyiphi i-frizz.
I-Instagram / @spokeandweal 15/46
I-bob enamandla — eyaziwa nangokuthi i-bob blunt — iyanda eSan Francisco. Lokhu kunqunywa isitatimende, kusho uJon Reyman, umnikazi we Kukhulume & Weal amasalon. Ukuphola kubaluleke kakhulu kune-sexy njengamanje. Noma kunalokho, kupholile kuyinto i-sexy entsha. Ubob oqinile usebenzela noma ikuphi ukuthungwa kwezinwele, kepha uma okwakho kuminyene, cela isitayela sakho ukuba sizincishe kuqala.
I-Instagram / @spokeandweal 16/46
Ama-bangs aqonde ngaphesheya angukuncoma okucacile kobobobukhali. Usengaba ne-bob enomthelela omkhulu noma ngabe ayinamatheli-iqonde, ngakho-ke donsa isomisi sezinwele ngokubukeka okuhlala kancane.
I-Instagram / @bowiesalon 17/46
I-lob ibukeka inhle ngobude obuhlukahlukene, okwenza iphelele kuzo zonke izinhlobo zobuso nezinhlobo zezinwele, kusho uStacie Bowie, umnikazi I-Bowie Salon ne-Spa eSeattle. Uma ikhule kancane — okungukuthi, idlulile ithambo lakho lekholamu futhi liseduze kwamahlombe akho — kuba lula ngisho nokuyiphatha nokuphatha kunokwasekuqaleni.
I-Instagram / @sbahle_mpisane 18/46
Kunzima impela ukungahambi kahle nge-lob. Isebenza ngobuso obuhle kakhulu bobuso bobuso, ukuthungwa kwezinwele, nokuthandwa kwesitayela. Ukuze uthole okuthile okuhlelayo okuncane, thatha indawo yakho yokungena ungene endaweni ye-shag ngamakhethini ama-bangs kanye nezendlalelo ze-choppy.
Ukubukeka okukhulu okuphuma Indawo yokwenza izinwele Eva Michelle EBoston le ngqovungqovu ebukhali ye-bob-pixie enama-curls aqinile ngakolunye uhlangothi futhi ingaphansi komunye. Icebo elihle lokuqinisekisa ukuthi uthola ukusika okufanekisayo: Letha izithombe zalokho okwenzayo ungakwenzi funa, ngaphezu kwezitayela ozithandayo. Labo bakhuluma kabanzi, kusho uMichelle Lee, umnikazi nomphathi we-salon.
I-Instagram / @lucyhale 20/46
Okunye ukuthatha ukuthambekela kokulinganisa? Le bob ebukhali kuLucy Hale. Ubuhle ngalesi sitayela bungaba njenge-avant-garde njengoba ufuna, kuye ngokuthi ubude bukhulu kangakanani.
I-Instagram / @simphiwe 21/46
Ngenkathi izendlalelo zegama zingakhumbuza izingqungqulu zokusika okungatheni okwakudinga isitayela esisindayo, le nqubo iye yavuselelwa eminyakeni yamuva futhi manje ingumsebenzi omncane kakhulu. Izendlalelo ezingabonakali ziyimfihlo yokwengeza ukuthi yonke into epholile ngaphandle kokuzama ukugunda izinwele ngendlela yesimanjemanje, azikho izingqimba ezinzima. Ukuhluka kwesimanjemanje kokubeka kungukona okuncane okuzungeze ubuso bakho, imvamisa kuqala ngasesilevini sakho futhi kusebenza kuze kube kubude, kusho owusizi wezinwele U-Alex Brown . Ubuqili ukugcina izingqimba zinde futhi zingenamthungo ukukhipha isisindo, futhi ungeze ukuthungwa nevolumu ngaphandle kokubukeka kusobala kakhulu. Ukuhlanganisa izingqimba kubaluleke kakhulu — kufanele zisikwe kahle ukuze zibukeke zingenamthungo, kusho uBrown.
I-Instagram / @sukiwaterhouse 22/46
Ngaphezu kokunyakaza, enye inzuzo yezendlalelo ezingabonakali ukuthi zichaza ngokushesha ubuso bakho futhi zilethe konke ukunakwa ngqo ezihlathini zakho. Indlela ozimele bezinwele nabushaya ngayo ubuso bakho ingakuguqula ngokuphelele ukubukeka kobuso bakho jikelele, kusho uBrown. Ngithanda ungqimba olushaya eduze kwesifuba ukulugcizelela. Uncoma ukucela umlobi wakho wezinhlamvu ukuba abeke okuncane ebusweni bakho (nje ukudlula isilevu) ukuvula ubuso bakho futhi ungeze ukunyakaza, kanye nokubeka okulula kakhulu ngaphakathi.
I-Instagram / @ karusalonatx 23/46
Zilungiselele ukuhamba mfushane kancane. UBrittany Archer, isazi sezinwele e-Austin's KaRu Salon , uthi bobs bebelokhu behamba phambili kulo nyaka eTexas. Qiniseka ukuthi ucela i-bob choppy ngokunyakaza, ngoba ubuntu balesi sitayela busesitayeleni futhi abunankinga, kusho u-Archer.
I-Instagram / @sbahle_mpisane 24/46
Icebo lokubethela lokhu kusikwa ngama-curls liqinisekisa ukuthi isitayela sakho sisebenza ngokukhethekile ezinwele ezisontekile. (The Uhlelo lokusebenza lwe-Swivel kuyinsiza enkulu yokuthola ochwepheshe bama-curl kanye namakhoyili endaweni yangakini.) Ama-bangs amahle nawo ayasiza.
I-Instagram / @sbahle_mpisane 25/46
Abesifazane e-Albuquerque bathanda i-shaggy lob, kepha nge-twist: blunt bangs. Ukungeza i-bang kuyindlela enhle yokwakha isitayela esisha ngaphandle kokuzibophezela kokugunda izinwele noma ukushintsha ubude obude, kusho uMelinda Danella, isazi sezinwele ku Ugqozi Uptown Salon eNew Mexico. Ungumlandeli omkhulu wokubhangqa ama-bangs amadlelo ebunzi anqunyiwe nobude bekhola.
Instagram / @ lindokuhle 26/46
Thatha lesi sithombe njengesithembiso sokuthi okungaqondile akudingeki kusho ukuqina. Buza isitayela sakho sezitayela ngama-bangs aqonde ngaphesheya ngentsiba kancane nokunyakaza kwe-retro vibe. Faka isifutho sikasawoti esincane bese ulungele ukuhamba. (Kufanele futhi ufunde izeluleko zethu ngamathiphu ama-bangs amahle kakhulu, ngqo kusuka kwabesifazane abanama-bangs abo esiziqhenya ngawo.)
I-Instagram / @sbahle_mpisane 27/46
U-Dueñas uthi izingane zezingane zikhulu ngo-2021 (mhlawumbe zithonywe yi- IGambithi LeNdlovukazi ?). Lesi siphetho sesitatimende esifushane silandela ithempeli elinezinwele ethempelini, ukudala umuzwa omangalisayo, omfushane, ovulekile, usho kanjalo. Lokhu kusebenza kahle kuzici ezincane ukuvula ubuso bakho.
I-Instagram / @siphokuhle 28/46
Cela isitayela sakho sokuloba ukuthi silolonge umphetho ukuze ulingane ubuso bakho, kusho u-Dueñas. Ngiphakamisa futhi ukudlala ngokuthungwa. Lokhu kuvame ukusebenza kakhulu lapho bengaphelele kakhudlwana.
Ngokuzithoba kukaDani Everson 29/46
Ngenkathi ama-2010s emayelana namagagasi amade anomoya opholile, alindele ukubona ukusikeka okwengeziwe ngezitayela kuma-20s. Lokho akudingeki ukuthi kusho ukugcinwa okuphezulu, noma kunjalo, yingakho uDani Everson, isazi sezinwele nomnikazi we KaClementine eDenver, uthanda lesi sitshalo esiphefumulelwe ngama-90s. Kwakuyisikhathi lapho izinwele zazingenankinga futhi sasingayisebenzisi ngokweqile imikhiqizo noma amathuluzi wesitayela, usho kanjalo. Kulandele ishumi leminyaka lokuphanjululwa izinwele nokugconwa, ngakho-ke kunengqondo ukuthi sekuqala kabusha manje njengoba sesiphuma esikhathini sokuqondiswa kwamakhemikhali. Ngomzamo ophansi kakhulu, u-Everson uthi qiniseka ukucela ukusika okuthuthukisa ukuthungwa kwakho kwemvelo futhi kulethe izithombe (cabanga UWinona Ryder ungene Ukulunywa ngokoqobo ).
UVera Anderson / Getty 30/46
Unyaka omusha yisikhathi esikahle sokuzama ukusikwa kwe-pixie eyiqiniso njengoZoë Kravitz. Ama-angular acishe ama-bangs enza lokhu kusika kube nomuzwa wokuvuna nokwanamuhla ngasikhathi sinye. Isikhathi sokwenza njengoTyra bese umemeza, ngi kusho UMia Farrow ungene Ingane kaRosemary ! kumgcini wezinwele zakho (JK, ngicela ungavumi).
Ngokuzithoba kukaMichelle Lee 31/46
B ingeyaseBoston — nama-bangs. Kuyindlela elula yokuthambisa ukubukeka nokwengeza ubukhulu, kusho Indawo yokwenza izinwele Eva Michelle 'U-Lee, ophawula ukuthi umphetho osongekile unesikhashana eBeantown. Ngokuqinisekile bayazibophezela kepha bangenza izimangaliso ebusweni bakho.
Instagram / @ imfihlo enkulu 32/46
Umphetho osongekile ubukeka umuhle ubhangqwe nenye yezitayela zezinwele ezinkulu zango-2021: okuvelele okugqamile. Ukuhlanganiswa kokuhlukahluka komthunzi nobude kwenza ama-curls pop.
Ngokuzithoba kukaRiawna Capri 33/46
Ngicabanga ukuthi ukugunda izinwele okuhle kakhulu kwabesifazane ngonyaka ka-2021 kuzoba mayelana nokwakheka — kuphume nokuthungwa okungcolile; kungena isakhiwo esipholishiwe, kusho uRiawna Capri, ongumnikazi obambisene naye I-Nine Zero One e-LA Uthi izinwele ezimfushane, ezinamakhanda okulala ziyathengiswa ngezitayela ezibushelelezi zobude obukhulu futhi ungalindela ukubona imigqa ethe xaxa, eminyene ekugundweni kwezinwele esikhundleni sokuchachamba, ukuthungwa okulucece.
Instagram / @ mthoko 34/46
Umkhuba ophucuziwe ufika ngabo bonke ubude — njengale bob ende. Ukuze ubukeke, uCapri uthi ucela umugqa oqondile, osindayo, ongenakho ukuthungwa, futhi uhwebe kuma-matte texturizers akho ngokukhanyisela izifutho.
EMemphis, ama-stylists abona ukwanda kwabesifazane kungabe kusikeka okufushane, okusikiwe lapho kuguqukela ezinweleni zemvelo noma kufuna isitayela okulula ukusiphatha ngemuva kokukhulisa i-Afro yabo. Yomibili le migwaqo iholela ekusikeni okuncishisiwe.
I-Instagram / @ abhisekh00 36/46
I-tapered cut ivumela izinhlangothi ezimfishane kanye nemigqa ehlanzekile futhi ishiya ubude obukhulu phezulu ukufeza izitayela zezinwele zemvelo ezifana ne-twist-outs, izinduku, amakhoyili, kanye nama-twand-twist, kusho uTaKeisha Berry-Brooks, isazi sezinwele nomsunguli Indawo Yokuphumula Yezobuhle eMemphis. Iningi futhi lizama ngemibala egqamile ukuqedela ukubukeka kokubi.
Ngokuzithoba kukaCharlie Martin 37/46
ESt. Ngomlobi wesitayela ofanele, ukukhula kwezinwele zakho akudingi ukuthi kube yinto eyoyikisayo, kusho uCharlie Martin, umqondisi wokudala futhi umnikazi we I-Salon One Six Six. Lokhu kusika kusebenza kahle ngezendlalelo ezithambile kulo lonke umqhele, hhayi ukuyekethisa ukugcwala okuzungeze umjikelezo noma ubude, kusho uMartin. Ukungeza umphetho ocashile kuyindlela enhle yokungakhathali.
I-Instagram / @sbahle_mpisane 38/46
Ubude be-collar lob + sideswept bangs + ama-curls agcwele = ukuphelela. Awukwazi ukuphikisana namaqiniso.
IMidwest ithola izindlela ezintsha zokwenza ama-lobs azizwe esha. I-lob yenza indlela ye-shag yesimanje, kusho uNicole Coil, isitayela Inyanga yeBlueberry eChicago. Izendlalelo eziningi ezibunjiwe zakha isimo esithambile, esifanele ama-curls namagagasi. Futhi kuyasebenza ukunikeza ukuphakamisa nevolumu kuzitayela ezibushelelezi. Ukuhumusha: Kusebenzela ukwakheka kwezinwele okuhlukahlukene. I-shag nayo ilungele izinyanga zasebusika ezingapheli zaseChicago, uthi, ngoba igcina ukwakheka kwayo ngaphansi kwezigqoko namabhontshisi kangcono kunezingqimba ezinde.
Amaklayenti athanda ngempela zonke izinhlobo zama-shaggy bangs kanye nezendlalelo eziningi ze-shaggy, kusho uTrygstad. Lesi sitayela sisiza ukwengeza ukunyakaza nobumnene kunoma yikuphi ukunqunywa kwezinwele. Njengoba lokhu kusika kuhlukahluka kakhulu, uthi uqiniseke ukuthi uletha izinkomba eziningi zokubukwa ekuqokweni kwakho ngakho-ke usekhasini elifanayo nesitayela sakho.
Imifula iBrent / ngezilokotho zeSouthern Curl 41/46
Muva nje konke esikuzwayo ukuthi ‘Gcina ubude kodwa nginike inkatho wezingqimba, ’kusho uRobin Sjoblom, umnikazi we I-Southern Curl e-Atlanta. Okwezendlalelo ezibukeka ngokwemvelo, uSjoblom nabo bonke abalingisi bakhe basebenzisa inqubo ebizwa ngokuthi i-Rëzo cut, esiza ukugcina ivolumu nobude kepha inganiki ama-curls noma yiziphi izingqimba ezinjengeishelufu.
Ngokusho kukaSjoblom, imfihlo yokubethela okusikiwe okusongekile njengalena ukuqinisekisa ukuthi isitayela sakho soma izinwele zakho, ezisiza ama-curls ukuthi abukeke engokwemvelo ngokwengeziwe. Futhi, njenganoma yikuphi ukusika, uthi ukuletha izithombe eziningi ezizosetshenziswa.
Instagram / @ nbongibhabhi 43/46
Izinwele ezinhle ze-bob azipheli isitayela, kusho uSergio Pattirane, isazi sezitayela URob Peetoom endaweni yaseBrooklyn eWilliamsburg. Ngokusikwa okulungile ungayigqoka i-chic futhi i-classy, ​​kodwa futhi i-tousled and rough. '
eyeshadow ukwenza amehlo ansundu pop
I-Instagram / @spokeandweal 44/46
Le bob kulula ukuyiphatha, kusho uPattirane, okwenza kube yiphutha lokungazami ukuzama kulo nyaka. Uma njengamanje unezinwele ezinde, uphakamisa ukuthi ushintshele kancane kwisitayela esifushane ngokuqala nge-bob ende futhi ubone ukuthi uyithanda kanjani. Ngemuva kwalokho ekuqokweni kwakho okulandelayo, ungenza i-chop emangalisayo kakhulu.
Ngokuzithoba kukaRossana Rojas 45/46
I-shag isaqhubeka nokuqina eMiami, kepha ama-stylists ayinika isibuyekezo ngezendlalelo ezinde. Lokhu kusikwa kuyamangalisa nganoma yibuphi ubude, ukuthungwa kwezinwele, nokuma kobuso, kusho uRossana Rojas, umlobi wezithombe eMiami UJunior & Hatter ISalon, enezela ngokuthi kube ukusikwa kwakhe okuphezulu okuceliwe kulo nyaka odlule ngenxa yokubukeka kwayo okungenamzamo.
UVera Anderson / Getty 46/46
Gcina bonke ubude bakho kepha engeza izingqimba ze-choppier ezungeze ubuso bakho njengoHalle Berry lapha. Yamukela ukuzwakala kwememezi kwalokhu okusikwe ukomiswa komoya ngenqwaba yesifutho sikasawoti.
indlela yokwenza izinwele ezimfushane zikhule ngokushesha
ukususwa kwezinwele zaseBrazil ngehlazo
ingubo yomshado yomshado kamakoti
ngaphezulu kwesitayela samabhuzu emadolo